केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग जुनसुकै मूल्यमा बन्छः परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली - छापा खबर - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङबीच दुई पक्षीय वार्तापछि बिहिबार बेइजिङमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको संभाव्यता अध्ययन गर्ने लगायत १४ वटा सम्झौता समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
रेलमार्ग सम्बन्धी सम्झौतालाई ओलीको चीन भ्रमणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पहल भन्दै साँझ बेइजिङबाट नेपाल र चीनले संयुक्त विज्ञप्ती पनि जारी गरेका छन्। केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग सम्बन्धमा भएको सम्झौता कस्तो हो त? यसलाई बेइजिङमा प्रधानमन्त्रीसँगै रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले केही प्रष्ट गर्ने प्रयास गरेका छन्, नयाँ पत्रिका दैनिकसँगको छोटो वार्तामाः
चिनियाँ रेल काठमाडौं पुग्ने समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ। खासमा चीनको अनुदान, साझेदारी वा सहुलियत ऋणमा बन्ने हो? यस विषयमा के समझदारी भएको छ?
पहिल्यै संभाव्यता अध्ययन हुँदैछ। आगामी अगस्टसम्म यो काम सकिन्छ। त्यसपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने समझदारी भएको छ। यसको लगानीको मोडालिटीको विषयमा थप छलफल गर्दै जान्छौँ।
डिपिआर बनाउनचाहिँ चीनले सहयोग गर्ने हो?
त्यो विषयमा पनि छलफल गर्दै जान्छौँ। संभाव्यता अध्ययन चीनले नै गर्ने हो, तर डिपिआर र लगानीको विषयमा छलफल गर्दै जाने हो। संभाव्यता अध्ययन नगरी लगानीको विषयमा कुरा गर्नु हतार हुन्छ।
तर, लगानी कसले गर्ने भन्ने विषयमा हामी किन स्पष्ट हुन सकेनौँ?
यो विषयमा पछि छलफल गर्छौं। अनुदानका लागि त अनुरोध भएको छ। तर, हामीलाई के थाहा छ भने यो निकै ठूलो परियोजना हो। अत्यन्तै ठूलो महत्वको परियोजना भएकाले हामी पनि लगानी गर्न तयार छौँ। तर, त्यसमा पछि छलफल गर्छौं। पहिले डिपिआर तयार होस्। यसको कुल लागत कति हुन्छ, त्यो पहिले स्पष्ट हुनुपर्‍यो ।
तर, यो प्रश्न किन पनि भने तपाईंको डेलिगेसनका सदस्य भन्दै छन्, ‘चीनले सम्पूर्ण सहयोग नगर्ने भयो, डिपिआरले ठूलो लगानी देखाउँछ, त्यसलाई नेपालले थेग्न सक्दैन । त्यसैले यो परियोजना बन्दैन।’ उनीहरूलाई तपाईंको जवाफ के छ?
यो विषयमा हामी स्पष्ट भएर लागेका छौँ। जुनसुकै मूल्यमा पनि हामी यो आयोजना पूरा गर्नेछौँ।
चीनको सदासयता कति रहन्छ?
त्यो चरणमा पुगेकै छैन। यो रेलमार्ग बनाउने काम अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ भन्ने उहाँहरूको बुझाइ छ। चिनियाँ राष्ट्रपतिले स्ट्रङ भाषामा भन्नुभएको छ। यसको मोडालिटीको विषयमा संभाव्यता अध्ययनपछि मात्रै भन्न सकिन्छ।
प्रकाशित ८ असार २०७५, शुक्रबार | 2018-06-22 08:23:56